आयोजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापना (अन्तरवार्ता) - २७ माघ २०७६, NepalTimes
आयोजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापना (अन्तरवार्ता)
काठमाडौँ : राष्ट्रिय योजना आयोगले कुनैपनि आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने गरी राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापना गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सँगै अन्य महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि कुनैपनि आयोजना कार्यान्वयनमा जानुभन्दा अघि राष्ट्रिय आयोजना बैैंकमा दर्ता गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन समेत दिएको छ । आयोगले आइतबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७ औं बैठकमा आयोजना बैंकको ढाँचा, अवधारणा पत्र र मार्गदर्शन प्रधानमन्त्री समक्ष पेस गरेको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कंडेलसँग हाम्रा सहकर्मीले गरेको कुराकानी ।
देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि बजेट खर्चमा वृद्धि हुन्छ भन्ने अपेक्षा सरकारको थियो । तर अहिलेपनि अन्योलता देखिएको छ । बजेट खर्च पूरानै प्रवृतिबाट भइरहेको छ । बजेट खर्च बढन नसक्नुमा समस्या के के हुन ? अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले शुरु गरेको राष्ट्रिय आयोजना बैंकले यी समस्याको समाधान गर्न सक्ला ?
राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुमा जति हामीले आँकलन गरेका थियौं त्यति खर्च हुन सकेको देखिदैन् । अहिले हामी फेरी आयोजना बैंक बनाएर जाने कुरा गरेका छौं त्यसले त योजनाको बाटोमा जान खोज्ला । तर काम गर्ने पुरानै परम्पराले कसरी काम अगाडि बढन सक्ला ?
मैले राष्ट्रिय गौरबका योजनाहरुका विषयमा त्यति धेरै समस्या देख्दिन । त्यसमा ध्यान गएकै छ र केही काम पनि भइराखेकै छ । समयमा पहिल्यैदेखि शुरु गरेका योजनाहरु सिद्धिएको छैन भन्दा यो चाहिं साँचो हो । राष्ट्रिय गौरव घोषणा गर्ने बेलामा बिचार गर्नुपथ्र्यो । तयारी नै भएको छैन् राष्ट्रिय गौरब भनेर घोषणा गरिसकियो । एमसीसीलाई राष्ट्रिय गौरबको योजना भनेर घोषणा गरिसक्यौं तर अहिले पनि हामी कार्यान्वयनमा जाने कि नजाने भन्ने विवादमा छौं । बुढि गण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरबका योजना भनेर घोषणा गरिसकियो जग्गा मुआब्जाका कुरा टुंगिएको छैन त्यहाँका पुर्नस्थापना गर्ने मान्छेहरुको विषय टुंगिएको छैन् । पश्चिम सेतिलाई राष्ट्रिय गौरवका योजना भनेर घोषणा गरिसक्यौं, तर त्यो कसले गर्नेहो भनेर थाहा छैन् । यस्ता खालका निजगढकै कुरा समस्या आएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कुरा गर्दा त्यसलाई कसरी लैजाने भन्ने अवस्थामा प्रस्ट छैनौं । राष्ट्रिय गौरवका योजना घोषणा गर्न हामीलाई हतार भयो तर त्यसको तयारी पुरा हामीले गरेनौ त्यसै कारणको समस्या अहिले भोग्दैछौं । तर जसको तयारी पुरा भएको थियो तिनको सतप्रतिशत त भन्न मिलेन तर ठिकै हिसाबले काम भएको छ । ९९ प्रतिशत काम भएपछि काम भएको मान्नुपर्छ । तर काम भएका परियोजनामा अन्तिममा के समस्या आउन सक्छ भन्ने अगाडि नै अनुमान गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । त्यही हिसाबले तामाकोसिमा समस्या भइराखेको छ अहिले त्यस्तै मेलम्चीमा तर त्यो पनि अवको दुई चार महिनामा सम्पन्न हुन्छ भन्ने देखिन्छ । मेलम्चीको पनि पहिलो फेजमा दोस्रो र तेस्रो त गर्न बाँकी नै छ । त्यसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका योजनामा समग्रमा हेर्दा हाम्रो उपलब्धी सन्तोशजनक छैन ।
प्रदेशहरुको पनि अवस्था त्यस्तै छ । विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन् । जस्तो प्रदेश नं. २ मा योजना बनाउन पनि अलमल देखिन्छ । अरु प्रदेशमा पनि त्यस्तै छ । त्यहाँ कस्ता समस्या रहेका छन र काम हुन सकिरहेको छैन ? अघिल्लो बैठकबाट यो बैठक सम्म आउँदा गरेका अपेक्षहरु पुरा भएका छन ?
त्यो चाहिं तयारीकै क्रममा छ । हामीले कार्यविधि तयार गरेर सम्माननिय प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन ग¥यौं । त्यसको ढाँचा कस्तो हो भन्ने र त्यसका आइटि सोलुसनहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले मन्त्रालयहरुलाई के भनेका छौं भने तपाईहरुले परियोजना बैंकमा दर्ता गरिसकेपछि मात्रै निरन्तरता दिनुहोस त्यो भन्दा अगाडि जान पाउनुहुन्न । पूराना भएपनि दर्ता गर्नुहोस नयाँलाई त परिनै हाल्यो यसरी जानुहोस भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौं ।